Meeshaalee - Foo'i filadhu
Furtuuwwan 1 hamma 3
Tarjaa 1 hamma 3
akkaakuu furtuu 1 hamma 3
Tarreewwan gabatee keewwatootaa keessaa, akkaataa dirqalaawwan fooyinsaa ammaatti foo'a.
Keewwatootii mallaattoowwan keewwata maxxansalaatiin addaanba. Yammuu keewwatoota footu, caancaloota yk arfii tokko isa akka foo'aa tahe ifteessuu nidandeessa.
Yoo keewwatootii tarree caancalootaan addaan baahniin walfakkate, dirqala kana fili.
Arfii isa bakka filatame keessaa akka foo'aa tokkootti fayyadamuudhaaf barbaaddu galchi. Foo'aa fayyadamuudhaan, LibreOffice qubannoo furtuu foo'uu, keewwata filatame keessatti murteessuu dandda'a.
Bakka arfii isa akka foo'aa tokkootti fayyadamuudhaaf barbaadduu filachuu dandeessuu, qaaqa Arfiiwwan Addayaa bana.
Afaan isa seeroota fooyinsaa qindeessuu fili. Afaanooni tokko tokkoo, arfiiwwan addaa, afaan ka biroo irraa addaan foo'u.
Yammuu gabatee tokko footuu, addaddummaa qubee guddaa fi qubee xixiqqaa gidduu jiru addaan basa. Afaan Eeshiyaatiif, haalataa addaatu fayyada.
Afaan Eeshiyaatiif, foyyadeenya sadarkaa-hedduu fayyadamuudhaaf, Qubee walsimsiisi fili. Foyyadeenya sadarkaa-hedduu keessaa, unkawwan haadhoon kan galfatootaii jalqaba qubeewwan unkaatiin madaalamuu, akkasumas, gubjaltoo ammoo nituffatamu. Yoo unkaaleen walfakkaatan, gubjaltoon kan unkaalee madalameera jechuudha. Hanga ammaatti yoo unkaaleen walfakkaatte, qubeewwan, yabbinii arfii, akkasuumas garagarummaan kan unkaalee Afaan Jaapaan Kana madaalameera jechuudha.